Vikings: War of Clans 4.2.0.1194 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.2.0.1194 လြန္ခဲ့ေသာ3ရက္က
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Vikings: War of Clans
Vikings: War of Clans ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မော်ကွန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်ခမ်းနားကငျြ့၏ခေတ်ရောက်လေပြီ။ သာသင်အင်ပါယာ၏ကံကြမ္မာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့နိုငျငံတျောသညျမကြူးကျြော Make တစ်အစွမ်းထက်စစ်တပ်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာ, နှင့်မြောက်အမေရိက၏သမိုင်းသို့သင်တို့၏နာမရေးလိုက်!
ဗိုက်ကင်း၏ကြမ်းတမ်းဤလောကသို့ထိုး: Clan MMO မဟာဗျူဟာဂိမ်းစစ်ပွဲ။ အောင်မြင်သောတိုက်ခိုက်မှုစီစဉ်, ထောင်ချောက်ကို တင်. , ပုံစံတိုကျခိုကျမှု။ အားကြီးသော jarls ၏စစ်အပြင်းထန်ဆုံးသူသည်ဘော်ပြတော်မူပါစေသော။
ကမ္ဘာအနှံ့ကလူသန်းပေါင်းများစွာစုစည်းဒါကမော်ကွန်းမဟာဗျူဟာဂိမ်းဗိုက်ကင်းအင်ပါယာ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုထုတ်ဖေါ်နှင့်သင့်အသက်တာသစ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် - စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်ခမ်းနားကြီးစွာသောအပြည့်အဝ။ စစ်ပွဲ၏အနုပညာကျွမ်းကျင်နှငျ့သငျနိုငျငံတျော၏အကဲအမှူးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဤနည်းဗျူဟာ MMO အတွက်တိုက်ပွဲအကြောက်ကင်း jarl, ကျွမ်းကျင်သောစစ်သည်တော်, အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောမဟာဗျူဟာများနှင့်သံတမန်များ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးပါတယ်။ သင်မြောက်အမေရိက၏ကျယ်ပြန့်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်အဘယ်သို့ပြုကြလိမ့်မည်နည်း
✔သင့်ရဲ့အင်ပါယာ၏အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးပှားနှင့်သင့်ရန်သူရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအဘို့အပင်တစ်ခုတည်းအခွင့်အလမ်းမချန်မထားကြဘူး။ ကိုသတိရပါ: ပညာရှိတဲ့စစ်ဘုရင်တစ်ဦးစစ်တပ်မပါဘဲအနိုင်ရလို့မရပါဘူး။ ရထားစုံလင်သောနည်းဗျူဟာများနှင့်ကောက်ကျစ်နည်းပရိယာယ်ဖွံ့ဖြိုး, စုဆောင်းလေ့ကျင့်။ ပါဝါအဘို့စစ်တိုက်မော်ကွန်းစေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
✔ဒဏ္ဍာရီဗိုက်ကင်း၏တန်ခိုးအာနုဘော်မှေးမှိန်လိမ့်မယ်တဲ့သူရဲကောင်းများ၏နေိုငျသောကျော်ကြားမှုအောင်မြင်ရန်။ သူလျှို, ယာဉ်လက်နက်များ Perform နှင့်ပွင့်လင်းသင်၏မျက်စိစောင့်ရှောက် - အလွန်ကြီးစွာသောစစ်လာသေး၏။ ကိုသာရွေးချယ်တော်မူသောသူတို့ကိုမရှင်သန်ကြလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးကစစ်ပွဲ။ အင်ပါယာ၏ခေါင်းဆောင်များကထိန်းချုပ်ထားတစ်ဦးကစစ်ပွဲ။
✔အဆောက်အဦးများစိုက်ထူခြင်းနှင့်အစွမ်းထက်အဆောက်အဦများတည်ဆောက်။ သင့်ရဲ့မြို့များ၏စီးပွားရေးကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအဆင့်မြှင့်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာအောင်ပွဲရန်သင့်နိုင်ငံတော်သို့ဆောင်ကြဉ်းနှင့်မြောက်ပိုင်းမြေများအတွက်အင်ပါယာရဲ့အာဏာကိုခိုင်မြဲစေပါတယ်ပါလိမ့်မယ်။
✔တိုက်ခိုက်မှုကနေသင့်ရဲ့အင်ပါယာကိုခုခံကာကွယ်နှင့်သင့်အစွမ်းသတ္တိ၏နယ်နိမိတ်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ ကိုသတိရပါ: သင်၏နိုင်ငံသည်သင့်မူလနေရာဖြစ်သည်။ အများဆုံးရဲရင့်ခြင်းနှင့်အဆုံးအဖြတ်သာလျှင်နတ်ဘုရား '' မျက်နှာသာရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
✔မဟာဗျူဟာရေးဆွဲပါ။ တစ်ဦးချင်းစီစစ်သည်တော်များ၏ခိုင်ခံ့အားနည်းအချက်များကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ, စုံလင်မှစစ်ဆင်ရေးသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု hone, သင်၏ရန်သူကောက်ကျစ်ထောင်ချောက်ကိုလှန်။ စစ်တိုက်ရာရလဒ်ကိုသင်တို့အပေါ်မှာမူတည်ပါသည်။
✔အားကွီးရန်သင့်လမ်းကြောင်းကိုဖောက်လုပ်။ အင်ပါယာ၏အုပ်စိုးသောမင်းဖြစ်လာမည်နှင့်မော်ကွန်းစစ်၌သင်တို့၏ရန်သူများကိုချေမှုန်း။ ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဆုပ်ကိုင်ထံမှအောင်ပွဲလိမ်ဖဲ့ခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောဥစ္စာကိုခံစား။
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော MMO ဗိုက်ကင်း: Clan ၏စစ်ပွဲအဖြစ်ကောင်းစွာပြောင်းလဲနေသောတိုက်ပွဲများ, ဒါပေမယ့်ချောမွေ့ဂိမ်းနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်သာဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သင်သည်အဘယ်သို့စောင့်ကြို?
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှစစ်မှန်သောကစားသမားတွေနဲ့• Epic စစ်တိုက်
ကမ္ဘာအနှံ့မှလူနှငျ့ဆကျသှယျနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဂရပ်ဖစ်ပျော်မွေ့။ ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ: ဗိုက်ကင်း: Clan ၏စစ် MMO မဟာဗျူဟာဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တကယ်ငွေကြေးအဘို့အ optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ဂိမ်းတိုးတက်အောင်နှင့်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ MMO ပရိတ်သတ်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် updates များကိုမိတ်ဆက်ကြသည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုမျှဝေဖို့အခမဲ့ခံစားရ - အတူတူကျနော်တို့ကဗိုက်ကင်းကမ္ဘာကြီးကို ပို. ပင် enthralling စေမယ်!
ယုံမှားစရာမရှိ, အင်ပါယာ၏ဂုဏ်အသရေဘို့အအကြီးစားစစ်တိုက်သင်က start ကနေညာဘက်ကိုချိတ်ဆက်ရပါလိမ့်မယ်။ အစွမ်းထက်နွယ်စု Create, နိုင်ငံတရှောက်လုံးကိုအောင်နိုင်, သင်၏ရန်သူများကိုချေမှုန်း။
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/VikingsWarOfClans
Instagram ကို: https://instagram.com/vikingswarofclans/
Vikings: War of Clans အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Vikings: War of Clans အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Vikings: War of Clans အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Vikings: War of Clans အား အခ်က္ျပပါ
snah စတိုး 41.92k 11.96M
Vikings: War of Clans ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Vikings: War of Clans အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.2.0.1194
ထုတ်လုပ်သူ Plarium Global Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://plarium.com/#/doc/policy/
လက်မှတ် SHA1: BA:96:6D:13:A9:C2:2D:3F:F9:A1:94:A1:BB:EA:D7:9E:02:19:57:E8
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Valentin Abalmasov
အဖွဲ့အစည်း (O): Plarium
Vikings: War of Clans APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ